Daafacyadii Ugu Qaalisanaa Taariikhda Kubadda Cagta
Updated About:341 days ago 0
Daafaca dhexe waxaa lagu tiriyaa halbowlaha ama booska ugu muhiimsan naadi kasta oo ciyaara kubadda cagta,sanadihii ugu danbeeyay kooxo farabadan oo katirsan horyaalada kala duwan ee Europe ayaa qarashaad fara badan kusoo iibsaday daafacyo caan ka ah kubadda cagta, hadaba waxaan idiin soo gudbineeynaa daafacyadii ugu qaalisanaa taariikhda kubada cagta ee qarnigan.
Reo Ferdinand. Manchesterunited (42 million):
Kooxda Sir Alex Fergusen waxay jabiyeen rikoorka suuqa kala iibsiga ciyaartoyda qaasatan daafacyada kadib markii ay sanadii 2002 naadiga Leeds United 42 million kaga soo iibasadeen Reo Ferdinand waxaana uu noqday daafaca ugu qaalisan dunida ee lacag intaas la’eg lagu soo gato.
Thuram Juventus (33miilion):
Marwada duqda ah ayaa sanadii 2001 waxay udhaqaaqday ineey soo iibsato daaficii birta ahaa ee kooxda Parma Lillian Thuram,juventus ayaa dooneeysay ineey dhibaatooyin markaas kahaystay dhanka daafaca ah iygoo markii danbana parma ku qanciyay ineey 33 million kaga samraan Thuram.
Pepe Realmadrid(30 million):
Naadiga Realmadrid ayaa kooxo badan dagaal lagashay sidii ay uheli lahayd daafaca dilka badan ee pepe, Real ayaa dhibaato farabadan umartay helitaanka daafacan laakiin wakiilkiisa Mendes ayaa gacan wen ka geystay in pepe uu soo caga dhigto Spain, ugu danbeyntii pepe oo lagu naaneeso Dameer Farowga reer portugal ayaa sanadii 2007 waxa uu 30 million kaga soo dhaqaaqay Fc-porto isagoo kamid noqday Realmadrid.
Ricardo Carvalho Chelsea (28.5):
sanado kahor 2004 naadiga Fc-porto ayaa lacag aad ufarabadan ku iibisay mid kamid ah daafacyadeeda ugu fiicnaa oo ahaa Carvalho waxaana sanadaas loo doortay daafacii ugu wanaagsanaa dunida, Carvalho ayaa horay usoo raacay tababarihiisii xiligaas ee Jose Mourinho kaasoo qabtay xilka tababaranimo ee Chelsea.
Alesandro Nesta Ac-milan (27.4 million):
Naadiga Ac-milan ayaa sanadii 2002 waxay lacag aad ufarabadan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kaga soo iibsatay daafacii qalbada dhexe ee naadiga SS Lazio Nesta waxayna kusoo qaadatay lacag dhan 27.4million.
Sergio Ramos Realmadrid(27 million):
Si ay udaboosho baahida dhanka daafaca ayaa Realmadrid sanadii 2005 waxay udhaqaaqday ineey lasoo saxiixato daafacii kooxda Sevillia Sergio Ramos,xiligaas Ramos waxa uu ahaa 19sano jir balse sevillia bixitaanka ramos kama aysan dhigin mid fudud ilaa ay Real kadhiibto 27 million.
Walter Samuel Realmadrid(24 million):
Samuel waxa uu kamid ahaa daafacyadii ugu qaalisanaa ay soo iibsato, Raelmadrid ayaa sanadii 2004 waxay 24 million Rome kaga soo iibsatay Walter Samuel.